Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-British Airways: Akusekho manenekazi namanenekazi
Utshintsho kumgaqo-nkqubo weBritish Airways wenziwe ukunqanda ukucalucalula abakhweli abangaweli phantsi kwezi ndidi zimbini, ezinje ngabantwana, kunye "nokuhlonipha imigaqo emitsha yentlalo."
I-British Airways iyalela abaqhubi beenqwelo moya ukuba bangaphindi babhekane nabakhweli beenqwelomoya 'njengamanene namanenekazi'.
Utshintsho kumgaqo-nkqubo weBritish Airways uthathwe njengesihloko esithi 'ukubandakanywa kunye neyantlukwano'.
Akukacaci ukuba abakhweli beenqwelo moya baseBritane baya kubuliswa njani endaweni 'yamanenekazi nenene' emveli.
I-British Airways ibe yinkampani yeenqwelo-moya yakutshanje ukuba ibe lixhoba lokuvuswa kokuchaneka kwezopolitiko kwaye ithathe indawo yemibuliso yayo yakudala yenkulungwane ngenye indlela yokungathathi cala ngokwesini.
The UK ophethe iflegi uyalele abaqhubi beenqwelo moya ukuba bangaphindi babhekise abakhweli "njengamanene namanenekazi", bagcine imibuliso engathathi cala ngokwesini endaweni yoko.
Utshintsho lomgaqo-nkqubo luye lwathathwa njengesihloko “sokubandakanywa neyantlukwano.”
Utshintsho kumgaqo-nkqubo lwenziwe ukuthintela ukucalucalula abakhweli abangaweli phantsi kwezi ndidi zimbini, ezinje ngabantwana, kunye "nokuhlonipha imigaqo emitsha yentlalo."
The Airways British Isithethi sivele kwangoko siqinisekisa inyathelo eliya kwi "watha thetha," siqwalasele ukuzibophelela kwenkampani "kubandakanywa kunye neyantlukwano."
"Sizimisele ukuqinisekisa ukuba bonke abathengi bethu baziva bamkelekile xa behamba nathi," utshilo isithethi seenqwelomoya.
Isibhengezo asihambanga kakuhle UK Amagqabantshintshi athembekileyo. Abanye baye babhengeza isigqibo somphathi sokulahla eli binzana, kudala libonwa njengedilesi esemgangathweni nenesidima, "uhlaselo" kwisimilo sesizwe saseBritane.
Ngelixa abakhweli begibela kwi Airways British Inqwelomoya ayizukuva “manenekazi nani manenekazi,” akucaci ukuba bazokujongiswa njani abahamba ngenqwelomoya ukuya phambili, kodwa inkampani yezindiza ngokwesiko "ikhuthaze abaqhubi bayo ukuba bazise ubuntu babo kwizibhengezo."
UAlan Phipps uthi:
Oktobha 13, 2021 kwi-09: 59
Ndiyawuqonda umnqweno wokubandakanya kodwa uthini ngesiko kunye nokuziphatha okuhle kwaseBritane? Ke ngoku singeva "Wamkelekile abantu abaHambayo abaquka amaLadies kunye naManenekazi, abantwana kunye nabahambi be-LGBT namanye amacandelo ohlukeneyo oluntu lwethu !! ”
Yeyiphi umthwalo wobubhanxa !! Ixesha elide nangaphezulu kombuliso ophezulu nguKapteni. Ingaba eli qela le-WOKE lifikelela njani kwindawo apho linyanzelisa utshintsho olunje? Kwenzeka ntoni kubuBritani bethu?